Global Voices teny Malagasy » Kenya: Maneho Hevitra Momba Ny WikiLeaks Ny Bilaogera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Marsa 2018 3:14 GMT 1	 · Mpanoratra Collins Mbalo Nandika Miranah
Sokajy: Afrika Mainty, Kenyà, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika
Nankalaza ny faha 47 taonany naha-Repoblika azy tamin'ny Alahady 12 Desambra 2010 ny Kenyana. Niavaka tamin'ny fanambarana fohy sy henjana mamely ny Ambasadaoro amerikana Michael E.Ranneberger  ao Kenya noho ny telegrama WikiLeaks andiany farany avy amin'ny Masoivoho Amerikana ao Nairobi ny lahateny nataon'ny mpitarika, anisan'izany ny filoha Kenyana Mwai Kibaki, ny praiminisitra Raila Odinga sy ny filoha lefitra Kalonzo Musyoka ao amin'ny governemanta iaraha-mitantana.
Na izany aza, somary misy fifanoherana kely ny hevitr'ireo bilaogera Kenyana momba ny telegrama WikiLeaks. Odegle Nyang ao amin'ny lahatsorany “ WikiLeaks sy ny fiarovana ” milaza hoe:
Tsy maintsy miaiky aho fa somary misafotofoto kely amin'ny hevitra momba ny wikileaks. Raha mpitsara aho no nandre izany raharaha izany, dia hiala avy hatrany tsy hisahana ny raharaha ny tenako. Na izany aza, hitako fa tena hafahafa izany. Iza no diso eto, i Assange (anarana sarotra tononin'ny tandrefana), sa ny diplaomaty? Etsy an-daniny, azonao lazaina fa tsy izy roa. Ny antony dia satria samy manana ny heviny manokana ny tsirairay ary ny hevitr'ireo diplaomaty momba ny asan'izy ireo dia hevitr'izy ireo fotsiny.
Tokony mijanona ho tsiambaratelo ny tsiambaratelo :
Tsy manana fifandraisana hamoaka izany amin'izao tontolo izao ny Wikileaks. Araka ny hevitro adaladala, tanora sy tsy tompon'andraikitra. Manana hevitra tsiambaratelo ny olona ary voajanahary izany no nomen'Andriamanitra. Raha tian'Andriamanitra hahafantatra izay eritreretin'ny hafa momba antsika isika, dia efa nataony olona mahagaga mahavita izany zavatra izany isika. Raha ny marina, heveriko fa ny telegrama izay heverin'ireo diplaomaty hafa momba an'i Etazonia dia mety ho ratsy kokoa noho izay efa novakiantsika hatreto.
Ho an'i Otieno Hongo, tsy mampihomehy velively ny votoaty ao anatin'ny telegrama io, hoy izy :
Nihazona ny fofonaiko aho mba hijery raha toa ka misy zavatra maningana momba an'i Kenya avy amin'ny Wiki Leaks tamin'ny herinandro lasa saingy tsy nahita na inona na inona ‘mampihovitrovitra ny tany” afa-tsy …. tondraky ny kolikoly tokoa i Kenya ary nanamora ny fanondranana fitaovana miaramila tany Sodàna Atsimo isika, manitsakitsaka ny fifanarahana momba ny fandriam-pahalemana izay nandraisantsika anjara fa ho atsangana isika …
Manana fanontaniana vitsivitsy  ho an'i Julian Assange  izy:
1. Ao ambadiky ny fihanaky ny onjam-peo FM sy ny Tantara Mitohy Meksikana tokoa ve ny governemanta Amerikana (miray tsikombakomba amin'ireo mpanao politika Kenyana manan-danja), zavatra roa ( onjam-peo FM sy ny Tantara Mitohy Meksikana ) izay nanao zavatra betsaka mba hampiroborobo fahadalana eo amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny noho ny vitan'ny sekoly, ka ny tanjona amin'izany dia ny fifantohan'ny vahoaka amin'ny rendrarendra ivelany sy ny fifanjifàna ka tsy afaka mahatsapa fa ritin'ny mpanao politika sy orinasa goavana izy ireo izay rehetra ananan-dry zareo.
2. Mihevitra ve ny governemanta Amerikana fa adala i William Ruto sy Alfred Mutua tamin'ny teraka sa izay no niezahan-dry zareo mafy hotratrarina? Moa ve Alfred Mutua Amerikana mpitsikilo ka namboarin'ny Governemanta Amerikanina mba hahatonga ny Keniana amin'ny ankapobeny ho toy ny adala ka tsy misy olona mandray antsika am-pahamatorana?
Mpanao sariitatra Patrick Gathara maneho ny fikasan'ny governemanta Amerikana hampangina ny WikiLeaks. Sary natolotr'i Patrick Gathara.
Manazava i Gathara fa ampahany amin'ny vaovao malaza maneran-tany mankany amin'ny famerana ny fahalalahan'ny media ny fanafihana ny WikiLeaks. Milaza izy fa fihatsarambelatsihy no ataon'i Etazonia amin'ny fampiantranoana ny Andro Erantany Ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety amin'ny taona 2011:
Noho izany, mihoatra noho ny fihetsika mihatsaravelatsihy ataon'i Etazonia amin'ny fampiantranoana ny Andro Erantany Ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety 2011, izay ny tanjona, araka ny filazan'ny tatitra antserasera iray, dia ny “hanaporofo ny fanoloran-tenany hanitatra ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fivezivezen'ny vaovao malalaka amin'ny vanim-potoana nomerika . “Ny lohahevitry ny fankalazana dia hoe” Media Taonjato faha-21: Sisintany Vaovao, Sakana Vaovao “. Mety ho fotoana tena tsara indrindra hisaintsainana ny antony nahatonga ireo governemantam-piaharamonina mpisava lalana tamin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety tamin'ny taon-jato farany, nanjary sakana vaovao amin'ny fampielezana ireo fahalalahana ireo amin'izany.
Satria samihafa ireo hevitra amin'izao fotoana izao, azo antoka fa raha miha-betsaka ny fivoahan'ny telegrama WikiLeaks, miha-betsaka ihany koa ny resadresaka ho hitantsika avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Kenyana .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/23/116452/
 telegrama WikiLeaks : http://213.251.145.96/cable/2010/02/10NAIROBI181.html
 WikiLeaks sy ny fiarovana: http://odeglenyanginv.blogspot.com/2010/12/of-wikileaks-and-security.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+OdegleNyang+%28Odegle+Nyang%29
 Tokony mijanona ho tsiambaratelo ny tsiambaratelo: http://odeglenyanginv.blogspot.com/2010/12/of-wikileaks-and-security.html
 hoy izy: http://reflectionsanddeflections.blogspot.com/2010/12/my-questions-for-wiki-leaks.html
 Manazava i Gathara : http://gathara.blogspot.com/2010/12/pressing-freedoms-shutting-up-wikileaks.html
 tontolon'ny bilaogy Kenyana: http://kenyaunlimited.com/feed.php